नेपालले सबैको मत जित्न सफल भएको छ – डा. मिनेन्द्र रिजाल, सूचना तथा संचार मन्त्री « Today Khabar
नेपालले सबैको मत जित्न सफल भएको छ – डा. मिनेन्द्र रिजाल, सूचना तथा संचार मन्त्री
प्रकाशित ६ पुष २०७१, आईतवार ०३:२१
० सार्क शिखर सम्मेलनले के सन्देश प्रवाह गर्यो विश्वव्यापी रुपमा?
– नेपालले आफ्ना छिमेकीहरुसंग आफ्ना पुराना सम्बन्धहरुलाई विस्तार गर्दै अझ नजिक एक अर्कासंग सहयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरी सबै नेताहरु संग संगै विश्वास आर्जन गर्न सक्ने मुलुकको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छ। नेपालले आफ्ना पक्षमा सबैको मन जित्न सकेको छ।
० मन त जित्न सक्यो तर शिखर सम्मेलनका सम्झौता कार्यान्वयनको चुनौति त अझै छ। यो पटक कार्यन्वयनको पक्ष कत्तिको सबल छ?
– कार्यान्वयनको चूनौति भएकाले नै गर्दा २९ वर्षमा सार्कले जति फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन। सार्क जस्तै अन्य थुप्रै क्षेत्रीय संगठनहरु, सार्क भन्दा केही अगाडी र केही पछाडी स्थापना भएका थिए ती धेरै बलियो भएर आएका छन्। तर यो पटको एउटा अत्यन्त सकारात्मक चिज भनेको उर्जा सम्बन्धि एउटा सम्झौता भएको छ त्यही नै हो। त्यसले अब यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई थप द्धिपक्षीय उर्जा सम्झैताहरु गर्न बाटो खुलेको छ।
० यति ठूलो सार्क शिखर सम्मेलनमा उर्जा सम्झैतालाई मात्र ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ र?
– एकदमै मान्नु पर्छ, किनभने नेपालको लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकताको विषय उर्जा विकासको हो उर्जा व्यापारको हो। हामीले यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन मात्रै हैन त्यो भन्दा अगाडी पनि हामीले दुईवटा महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गर्यौ यो उर्जा विकासको क्षेत्रमा। एउटा माथिल्लो कर्णाली विकासको लागि अरुण दोस्रो र तेस्रो। यी दुईवटा आयोजनाहरु जोड्दाखेरी झन्डै २ हजार मेगावाट विजुली यो ५/६ वर्षमा तयार हुन्छ। यो दुईहजार मेगावाट आफैमा महत्वपूर्ण छ र यसले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपाल लगानीका लागी राम्रो देश भएको छ। नेपालमा लगानीको लागि वातावरण निर्माण भएको छ जसले विश्वव्यापी रुपमा उर्जामा लागानीको लागी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ। त्यसै सिलसिलाको हामीले भारत संग सम्झैता गर्यौं र अहिले दक्षिण एसियाली संगठनको बीचमा सहकार्यको एउटा सम्झौता भयो त्यसैले अहिले काठमाडौंमा भएको शिखर सम्मेलनले दिनुपर्ने सन्देश उर्जाको क्षेत्र नेपालको लागी महत्वपूर्ण छ। भारतका लागि महत्वपूर्ण छ र पूरै दक्षिण एशियाली संगठनहरुका लागी महत्वपूर्ण छ भन्ने नै हो र मलाई लाग्छ हामी त्यो सन्देश दिन सफल भयौं।
० तर सार्क राष्ट्रमा अत्यन्त आवश्यक र शिखर सम्मेलन भरि चर्चाको विषय रहेको कनेक्टीभिटी र रेल वे सम्झैता पनि त हुन सकेन नि?
– यो विषयमा तीन महिनाभित्र यी सम्झौताहरुलाई अन्तिम रुप दिनका लागि बैठक बस्ने र टुङ्ग्याउने भन्ने पनि सहमति भयो। त्यो पनि ठूलै उपलब्धी हो भन्ने मलाई लाग्छ।
० के तीन महिनापछि पनि यी विषय टुंगिने या यो सम्झौता हुने सम्भावना कत्तिको प्रवल छ?
– पहिलै अविश्वासको कुरा गरेर काम छैन। तीन महिना भित्रमा ८ वटै राष्ट्रका यातायात मन्त्रीहरु भेटेर यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडी बढ्ने भन्ने कुरा आफैमा राम्रो कुरो हो। तपाईले अघि भनेको जुन हामी दक्षिण एशियाली मुलुकहरु भैतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पछाडी छौ भन्ने विषयमा कुरा गर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु धेरै भएका छन्। र अर्काे कुरा यो क्षेत्रका मुलुकहरुमा आपसमा व्यापार एकदम कम छ, लगानी एकदम कम छ र एक अर्काे मुलुकमा व्यापार, वित्तिय, र लगानीका बारेमा अब विस्तार गर्ने सम्झैताहरु भएका छन्। जसले यो विस्तारलाई अझ मद्दत पुर्यासउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
० सम्झौता त विगतमा पनि भएका होइनन् तर कार्यान्वयन चाहिँ भएका छैनन् नि?
– सार्क स्थापना भएको २९ वर्ष भयो। मैले पहिले पनि सार्क सम्मेलनमा सभागिता जनाइसकेको छु। तर यस पटक काठमाडौंमा सम्पन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलन जस्तो सकारात्मक क्षण कहिले भएन। त्यसैले म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु कि यसपटक भएका सम्झौताहरु अवश्य कार्यान्वयन हुनेछन्।